Post Detail | MM News Channel
Tuesday . 26 January . 2021
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေနဲ့အတူ 100 Most Beautiful Faces (2020) စာရင်းမှာဆန်ခါတင်ဝင်လာသူ(၂)ဦး
TC Candlerကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကို အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး အချောအလှဆုံးအယောက်(၁၀၀)စာရင်းပြုလုပ်ပြီး နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်နေကြပါ။ ဒီလိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့TC Candler ရဲ့ The Most Beautiful Faces (2020) အယောက်တစ်ရာစာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်နှစ်ဦးပါဝင်လာပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးချောလေးဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့အတူ ချစ်စရာမော်ဒယ်လ်၊မင်းသမီးချောလေးနော်ဖောအယ်ထားပါဝင်လာတာပါ။ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို အသားဖြူဖြူနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီး သွယ်လျလှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာ အသက်နဲ့မလိုက်အောင်နုပျိုတဲ့သူလို့နာမည်ကြီးတဲ့သူပါ။ နော်ဖောကလည်း တက်သစ်စတွေထဲမှာ အပြုံးလှလှလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်လည်း ပုရိသတွေဝန်းရံအားပေးခြင်းခံရတဲ့ မော်ဒယ်လ်၊မင်းသမီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေပါဝင်လေ့ရှိပြီး ဟောလိဝုဒ်၊ ဘောလိဝုဒ်၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေအပါအဝင် မီဂန်မာကယ်တို့လိုအမျိုးသမီးတွေအထိပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် TC Candler ကထုတ်ပြန်တဲ့ 100 Most Handsome Faces 2020 စာရင်းမှာလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေနဲ့အတူ ပိုင်တံခွန်ကလည်း ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။ ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူဆန်ခါတင်စာရင်းကိုပါဝင်လာဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ တကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။